> Resource > iPod > Music Macdan iPod in Computer / Lugood Maktabadda
Waxaan la yaabanahay hadii waxaa jiray barnaamijka ama hab lagu soo saaro heesaha oo dhan ka iPod si aad u computer. Waxaan doonayaa in aan reformat aan computer, laakiin ma doonayo in aan u gudubno finalka ka kaaftoomi Guba oo dhan gabayadayda. Sidoo kale haddii aad soo saaro MP3s-ka iPod si aad u computer, ayey saameyn tayada codka si kasta oo ka?
Ma doonaysaa inay soo saaro music ka iPod in computer ka dib markii la kulma shil computer ama reformat? Waayaya maktabadda Lugood iyo go'aansato in aad u dhiska ay soo saarida music on iPod leh? Wax kasta waa la samayn karaa marka aad leedahay iPod si qalab kala iibsiga computer - Wondershare TunesGo (Windows). Qalabka xunna loogu talagalay ku siinaysaa fursad uu si ballaaran u soo saaro music aad iPod u computer iyo Lugood aad.
Haddii aad go'aansato in aad soo saaro music ka iPod si Mac, fadlan ka Wondershare TunesGo (Mac) . Waxa kale oo aad awood Macdan oo dhan ama soo xulay heesahaaga Mac ay ka mid yihiin Lugood on Mac aan ku xirid ah.
Download qalab si ay isugu dayaan soo saarida music ka iPod in kombiyuutarka & Lugood.
Ku rakib version saxda ah ee qalab this on your computer. Halkan, waxaan doonaa qaadan version daaqadaha sida tusaale.
Fiiro Gaar ah: Iyada oo Wondeshare TunesGo, Laydinka soo karaa music ka daydo iPod, waxaad tidhaahdaan, iPod taabto, classic iPod, iPod shaandheeyn iyo nano iPod u computer iyo Lugood. Laakiin, version Mac ma taageeri iPod xiriiri 3. Hubi faahfaahin ku saabsan oo dhan lagu daydo iPod taageeray .
Sida loo soo saaro music ka iPod u computer / Lugood
Si aan ku bilaabo, abuurtaan qalab this on your computer. Markaas, waxaad ka heli daaqadan hoose.
Tallaabada 1. Isku aad iPod in computer Windows ah
By deeruhu cable USB in kombiyuutarka ah oo wuxuu galay, waxaad ka heli kartaa iPod ku xiran. Marka iPod la aqoonsan yahay, waxay ka muuqan doontaa furmo ugu weyn.
Tallaabada 2. Warbixiinta music off iPod in Lugood iyo kombiyuutarka
In uu furmo suuqa ugu weyn, qalab aad bixisaa toobiye ah lagu soo saaro music on iPod in Lugood iyo kombiyuutarka.
Guji "Copy iDevice in Lugood". Wada hadal A muujinaysaa ilaa. Guji "Start" si ay u muujiyaan xogta aad soo saaro karaa in Lugood. Just sax Music iyo Playlists. Markaas, guji "nuqul Lugood".
By gujinaya "Dhoofinta Music si gal", Laydinka soo karaa music ka iPod in kombiyuutarka.
Si aad u soo saaro heeso ka iPod in Lugood iyo computer ka, sidoo kale waxaad isku dayi kartaa sidan. In geed bidix tusaha, guji "Media" in ay daaha ka furmo suuqa music ah. Haddii uu furmo suuqa ma aha oo ku saabsan muusiga, waxaad riixi kartaa "Music" on line ugu sareysa ay u muujin lahaayeen. Markaas, dooro songs in aad jeceshahay in aad soo saaro.
By gujinaya "Dhoofinta in", Laydinka soo karaa music off iPod oo waxaan iyaga ku badbaadin kombiyuutarka.
By gujinaya saddexagalka hoos "Dhoofinta in"> "Dhoofinta in Lugood Library" ama riixaya "Smart dhoofinta in Lugood", aad awoodo inuu soo saaro files music in Lugood.
Waxaa jira farqi u dhexeeya yar "Dhoofinta in"> "Dhoofinta in Lugood Library" iyo "Smart dhoofinta in Lugood". Markaad gujiso "Dhoofinta in"> "Dhoofinta in Lugood Library", Laydinka soo karaa music on iPod eegista in Lugood. Waxaa laga yaabaa in aad ha Macdan music si joogta ah marka music ku saabsan iPod ayaa haatan ku Lugood. Si kastaba ha ahaatee, marka aad guji "Smart dhoofinta in Lugood", qalab shaandhayn doonaa heeso ka jira in Lugood iyo Macdan heesaha oo kaliya on iPod.
Iyadoo version Windows ah, aad tahay karin xataa Macdan playlists in computer iyo Lugood. Guji "playlist" si ay u muujiyaan suuqa kala playlist ah. Dooro playlists sida aad doonayso inaad guji saddexagalka hoos "Dhoofinta in". In liiska jiido-hoos, guji "Dhoofinta in My Computer" ama "Dhoofinta in Lugood Library" Macdan playlists in Lugood iyo computer.
Fiiro gaar ah: The version Mac ma ha uusan Laydinka soo playlists in computer iyo Lugood in muddo ah.
Isku day TunesGo in ay isku dayaan sidii ay u soo saaro music ka iPod ah in PC / Lugood.
Sida loo Edit playlist on iPod
Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Faylal ay ka iPod xiriiri 5/4